Suurtagal ma tahay in la dhiso dabaqyo joogta ah oo bilaash ah?
Haddii aad akhriso maqaalkan, ka dibna aad u badan tahay waxaad jeclaan lahayd inaad ka dhigto gaadiidka badan ee ilahaaga internet, blog, maqaal, iyo wixii la mid ah. Qodobkan waxaa si gaar ah loogu talagalay kuwa doonaya in ay helaan dib-u-celin joogta ah iyagoo aan wax kharash ah isticmaalin. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogtahay in dib-u-xajmeedka PR oo bilaash ah, uu qaadan doono dulqaad iyo shaqo adag. Haddii aad ka heli karto dib u habeeyn iyo farsamo sare oo PR oo aan dadaal lahayn, ka dibna uma baahnid inaad sidan u isticmaashid, miyaad tahay?
Aan hore u sheegno ereyada ku saabsan dhabarka iyo muhiimada ay u leeyihiin jiilka. Guud ahaan, backlinks waa waxa dhacaya marka ilware shabakad kale uu isku xiro. Waxay u shaqaysaa si fudud. Ugu horreyntii, Goolasha Google waxay u kala qaybsamaan ilaha meesha la xiro. Waxay qiimeynayaan tixgelinta iyo tayada content ee ku saleysan ilahaas. Intaa waxaa dheer, makiinadaha raadiyuhu waxay fiiro gaar ah u leeyihiin bogga internetka iyo PageRank iyo sidoo kale xaddiga iyo tayada gaadiidka soo socda. Marka cilmi-baaristaan ​​la sameeyo, raadi raadiyeeyaal si deg-deg ah u fiirsada ilaha shabakada ee isku xiran si loo hubiyo in isku xirku yahay mid khaas ah oo kalsooni leh. Marka la eego xogtan, Google wuxuu qorayaa inuu kordhiyo bogga kuxirsan ee kuxirnaa marka xigta ee ku xigta agagaarka.
Taasi waa sababta dib u celin badan oo macnaheedu yahay gaadiidka intaa ka sii badan iyo ka dibna darajada bogga sare. Gawaarida macnaheedu waa macaamiisha cusub oo lacag u keenaya ganacsigaaga internetka. Sidaa daraadeed, waxaan dhihi karnaa backlinks inay kuu keenaan lacag iyo ku soo laabashada sare ee maalgashiga.
Miyuu macquul yahay in la iibsado backlinks joogta ah?
Dad badan oo websaydh ayaa go'aaminaya inay dib u iibsadaan si ay u dedejiyaan geeddi-socodka hagaajinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad khabiir ku noqoto si aad u iibsato si dhab ah kuwa dib u celiya oo qiime u geyn kara goobtaada. Haddii kale, waxaad heli kartaa wax soo laabasho ama xitaa wax ka sii dar.
Waxaa jira khubaro badan oo khibrad SEO ah oo khibrad u leh webka kuwaas oo ballanqaadaya dhisidda "PR" ama "qiime sare". Iibsashada noocyada xiriirka ah, adigaa lacagtaada lacagta kaa qaada. Sababtoo ah xitaa haddii dhabarka uu ka yimaado ilaha webka leh heerka sare ee bogga, macnaheedu maahan haddii aysan ku haboonayn goobtaada. Waxaa intaa dheer, Google si sahlan ayaa loo ogaan karaa isku xirka la iibsaday iyo ciqaabta labadaba iibiyaha iyo iibiyaha.
Shaki kuma jiro in qaar ka mid ah adeegyada ay ka helayaan xiriirkaaga aad tayo sare leh. Waxay ku dhisi karaan dib-u-celin aad u badan sidii aad u bixin kartid. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal dhacdo xiiso leh, sida ugu dhaqsaha badan ee aad joojiso bixinta adeegyadeeda, xiriirada loo dhisay boggaaga ayaa laga saarayaa. Taasina waa sababta dib u qabsashadu ayan u ahayn habka ugu wanaagsan ee laga helo gaadiidka mashiinka raadinta.
Maxay yihiin siyaabo kale oo loo helo xiriir joogto ah?
Waxaad dib u dhisi kartaa dib u qaabeyn dhab ah, adiga oo dhisto xiriir wanaagsan ganacsi leh ilaha webka la xiriira. Ama haddii loola cararay waxaad shaqaaleysiin kartaa shaqaale SEO ah oo waqti buuxa ah si loo dhiso dib u habeyn hab sax ah. Waxay ku kacaysaa wax badan oo ka badan lacagtaan gadaashooda ah ee aad ku daawan kartid boggaga kale, laakiin waxay ku sii wadi doonaan boggaaga bogga SERP ee ugu horeeya muddo dheer Source .